dang | Ratopati
दाङमा निषेधाज्ञा खुकुलो access_timeअसार १५, २०७८
दाङमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णय भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा आज बसेको कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै बुधबारदेखि सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले एकहप्ता लकडाउन थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला ...
दाङमा थप दुई कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु access_timeबैशाख १९, २०७८
दाङ । यहाँको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीको सघन कक्षमा उपचाररत थप दुईजना सङ्क्रमितको आज मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ९ का ४६ वर्षीय पुरुष र घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का ७७ वर्षीय पुरुष रहेको कोरोना अस्पताल...
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको हिरासतमा एक जनाको मृत्यु access_timeफागुन ९, २०७७
दाङ । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको हिरासतमा रहेका एक ब्यक्तिको मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिववहादुर सिंहका अनुसार हिरासतमा रहेका रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका वडा नं. ३ पातिहाल्ना निवासी ४५ वर्षीय नन्दलाल वलीको मृत्यु भएक...
दाङमा पनि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु access_timeमाघ १४, २०७७
दाङ । दाङमा कोरोना विरुद्धको पहिलो चरणको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ । पहिलो चरणमा घोराही र तुलसीपुरमा गरि दुई स्थानमा खोप लगाउन सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले खोप अभियानको उद्घाटन ...
पाँच महिनामा दाङका १२ जनाको विदेशमा मृत्यु access_timeपुस ८, २०७७
घोराही । पाँच महिनाको अवधिमा दाङबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पुगेका १२ जनाको मृत्यु भएको छ । कार्यस्थलमा विभिन्न घटनामा परि उनीहरुको मृत्यु भएको सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजना दाङले जनाएको छ । मृतकहरु मध्ये ६ जनाको परिवारले एक करोड १३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्...
देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको खुसीयालीमा दाङमा दिपावली (फोटोफिचर) access_timeअसोज २०, २०७७
बुटवल । प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले दाङ्गको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी कायम गरेलगत्तै दाङ्गवासीहरुमा खुशीयाली छाएको छ । खुसीयालीसँगै दाङका बजार क्षेत्रका चोक–चोकमा दिपावली गरिएको छ । आज राती दिपावली गरे बुधबार बिहान भालुवाङ्...
दाङमा बिहान ६ बजेदेखि १२ बजेसम्म बजार खुल्ने access_timeभदौ २१, २०७७
दाङ । दाङमा भोलि अर्थात (सोमबार) देखि बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म बजार खुल्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले सोमबारदेखि बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो १२ सम्म बजार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले भदौ २८ गते...
दाङमा एक हप्ता निषेधाज्ञा access_timeभदौ १२, २०७७
घोराही । आइतबार रातिदेखि दाङमा एक हप्तासम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ । कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार घोराहीमा बसेको बैठकले एक हप्ता जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको जिलल प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्दले बताए । ...
रेडक्रसको अवैध काममा सिडिओको संरक्षण access_timeभदौ ५, २०७७
तुलसीपुर । यतिबेला नेपाल रेडक्रस सोसाइटिभित्रको अनियमितताले चारैतिर छाएको छ । पछिल्लो समयमा केन्द्रमा मात्र नभई जिल्लामा पनि अनियमितता हुन थालेको छ । दाङमा रेडक्रसले फोटोकपी मेसिनदेखि पासपोर्टलाई चाहिने आवश्यक कागजातको समेत काम गर्दै आएको छ । त्यो पनि अवैधरुपमा जि...
दाङमा करेन्ट लागेर दाजुभाइको मृत्यु access_timeसाउन १९, २०७७
दाङ । दाङमा करेन्ट लागेर दुई दाजुभाइको आज मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका– १ हर्नोक निवासी १४ वर्षीय वीरबहादुर रावत र उनका १० वर्षीय भाइ तेजबहादुरको मृत्यु भएको हो । मकैबारीमा जङ्गली बँदेल मार्नका लागि थापिएको वि...
पानीमुनिको पुलको पीडाः बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स खोलाले बगाएपछि डोजरले निकाल्यो access_timeसाउन १४, २०७७
दाङ । दाङको एउटा खोलाले बिरामीसहित बगाएको एम्बुलेन्स डोजरले निकालेको छ। घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने हापुर खोलाले बुधबार बिहान बिरामी लिएर तुलसीपुरतिर जाँदै गरेको एम्बुलेन्स बगाएको थियो। घोराहीबाट बिरामी लिएर तुलसीपुर जाँदै गरेको...
प्रहरीले बाढीमा बगेका एम्बुलेन्ससहितका बिरामीलाई यसरी बचायो access_timeसाउन १४, २०७७
दाङ । बाढीले आज बिहान बगाएका दुई एम्बुलेन्सको प्रहरीले बचाउ गरेको छ । जिल्लाको लमही–तुलसीपुर सडकखण्डमा पर्ने हापुरखोला र सिस्ने खोलामा आएको बाढीले बगाएका एम्बुलेन्सलाई प्रहरीको सक्रियतामा एम्बुलेन्समा सवार बिरामीसहित सकुशल बचाउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङक...
दाङमा १५ किलो चरेशसहित ६ जना पक्राउ access_timeसाउन १२, २०७७
बुटवल । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका १४ नयाँ बसपार्कबाट १५ किलो चरेशसहित ६ जना पक्राउ परेका छन् । ५ नं.प्रदेश प्रहरी ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नयाँ बसपार्कमा रहेको रोल्पा नुवागाउँ होटलबाट १५ के.जी. लागुऔषध चरेससहित ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रह...
दाङको मुसोटमा जीप दुर्घटना, १ जनाको मृत्यु, ४ घाइते access_timeसाउन १, २०७७
बुटवल । दाङको घोराही सडक खण्डस्थित मुसोटमा आज बिहान जीप दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन् । कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट दाङको तुल्सीपुरतर्फ आउँदै गरेको रा १ च ९६६२ नम्बरको बोलेरो जीप अनियन्त्रित भएर घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ मुसोटमा द...
त्रिशूल प्रहारबाट एक पुरुषको मृत्यु access_timeजेठ ३०, २०७७
दाङ । दाङ बबई गाउँपालिका–३ धनवास निवासी ४७ वर्षीय नारायण डाँगीको त्रिशूल प्रहारबाट मृत्यु भएको छ । आज बिहान सोही स्थानका २८ वर्षीय बालाराम वलीले दुर्गा भगवती मन्दिरमा रहेको त्रिशूल प्रहार गर्दा डाँगीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरक...
दाङका कोरोना सङ्क्रमितमा डेङ्गु पनि भेटियो access_timeजेठ १८, २०७७
दाङ । दाङका एक कोरोना सङ्क्रमितमा डेङ्गु रोग भेटिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड–१९ फोकल पर्सन कमल चन्दका अनुसार बबई गाउँपालिका वडा नं ६ निवासी ३० वर्षीय पुरुषमा डेंङ्गु फेला परेको हो । कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा उपचाररत उनलाई नियमित ज्वर...
दाङमा ८ जना कोरोना जितेर घर फर्किए access_timeजेठ १६, २०७७
बुटवल । दाङको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीबाट ८ जना कोरोना जितेर आज घर फर्किएका छन् । अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोण वलीका अनुसार आज घर फर्कनेमा गढवाका १ जना, कपिलवस्तुका ४ जना र बाँकेका ३ जना रहेका छन् । संक्रमितहरुको २ पटकसम्म चेकजाँच गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि डिस्च...
बेलझुण्डीका आठ सङ्क्रमित नेगेटिभ access_timeजेठ १४, २०७७
दाङ । दाङको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा रहेका आठ सङ्क्रमितको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको छ । सोह्र जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकामध्ये बाँकेका तीन, कपिलवस्तुका चार र दाङका एक जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड–१९...